Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l0712 lar
Mifanaraka amin'ny drafitr'Andriamanitra (1Tes. 4:6-8)
Alarobia 15 Aog.
Vakio ny 1 Tes. 4:6–8. Inona no ambaran’i Paoly mikasika ny faharatsiam-pitondran-tena eo amin’ny firaisana aranofo?
Nanatona Pasitora iray ity lehilahy iray izay nanana fahazarana nanao firaisana ara-nofo ivelan’ny fanambadiana, ka hoy izy: “Nandritra ny fahatanorako dia nihevitra aho fa zavatra iray ihany ny firaisana ara-nofo sy ny fitiavana. Kanefa rehefa niroso tamin’ny fanambadiana aho dia tsapako fa ny firaisana ara-nofo mialoha ny fanambadiana dia tsy hoe manimba ny tenantsika ihany (tratry ny areti-mifindra avy amin’ny firaisana aho) fa manimba ny saintsika koa. Na dia efa Kristianina aza izahay mivady ankehitriny, dia mitolona amin’ny fitondran-tena sy ny fihetseham-po izay nentiko niditra tao amin’ny fanambadiana vokatry ny lasa ratsiko.”
Ny fisian’ireo fandrarana ataon’ny Baiboly dia tsy hoe tsy tian’Andriamanitra hahazo fahafinaretana isika. Mifanohitra amin’izany aza, fa miaro antsika amin’ny ratra arabatana sy ara-pihetseham-po ateraky ny fijangajangana ireny fandrarana ireny. Mifehy tena isika tsy hanao firaisana ara-nofo satria mitandro ny mety ho vokatr’izany eo amin’ny fiainan’ny hafa. Ny olona tsirairay dia fanahy izay nanoloran’i Kristy ny ainy; tsy tokony hisy fanararaotana azy ireny eo amin’ny lafiny firaisana ara-nofo, na amin’ny fomba ahoana na amin’ny fomba ahoana. Ny fanaovana izany dia fahotana atao amin’ilay olona sy amin’Andriamanitra (jer. ny Gen. 39:9). Ny firaisana ara-nofo dia tsy mahakasika izay ataontsika amin’ny hafa fotsiny ihany, fa mahakasika izay ataontsika amin’i Kristy amin’ny alalan’ny fihetsika asehontsika amin’ny hafa (jer. koa ny Mat.25:34–46).
Rehefa dinihina àry izany, ny firaisana ara-nofo dia mahakasika ny fifandraisantsika amin’Andriamanitra. Ny Jentilisa izay tsy mahalala an’Andriamanitra no miaina amin’ny fanaranam-po amin’ny filàna fotsiny (1 Tes. 4:5). Ny fandavana an’Andriamanitra no miteraka faharatsiam-pitondran-tena. Ireo izay mandà ny fampianaran’ny Baiboly mikasika io lohahevitra io dia mandà koa ny antson’Andriamanitra, ary mandà an’Andriamanitra mihitsy (1 Tes. 4:8).
Etsy an-kilany kosa, rehefa manaraka ny drafitr’ Andriamanitra isika, ny firaisana ara-nofo dia tonga fanehoana kanto ny fitiavana mahafoy tena izay narotsak’Andriamanitra tamintsika tao amin’i Kristy (jer. koa ny Jao. 13:34,35). Fanomezana avy amin’Andriamanitra izany ary rehefa ampiasaina araka ny fikasan’Andriamanitra ho antsika dia maneho amin’ny fomba manokana ny fitiavana itiavan’Andriamanitra ny taranak’ olombelona sy ny fifandraisana ety iriny hisy eo Aminy sy ny vahoakany.
Voalaza ao amin’ny 1 Tes. 4:7 fa antsoina “ho amin’ny fahamasinana” isika. Ahoana no fahazoana ny hevitr’izany? Moa ve mahafaoka sehatra hafa ankoatra ny fitondran-tena eo amin’ny firaisana ara-nofo izany? Raha eny, inona koa no sehatra hafa voafaoka ao anatin’izany?